Zvinoda Current Situation
In kukurukurirana network, pane vazhinji chawo chiteshi richiparadzirwa munyika yose, uye vazhinji vavo vari riri marefu, zvakaoma kugadzira, Tsika kugadzira nepamugwagwa patrol zvinozoita anotora zvizhinji manpower, mari, uye murombo akavimbika uye timeliness. Kuti pave nechokwadi chokuti nguva dzose kushanda samambure muna China, mukuru zvinodiwa musimba michina uye jenareta gadziriro unomutswa.
Izvi zvinodiwa zvinosanganisira: Remote vachiongorora kuti powering zvokushandisa, kutaurirana midziyo; kuderedza kwerunyararo cost, uye kuona ruzha nokushanda ezvinhu enyika ino kuwedzera nzwisisika kushanda kunyatsoshanda.
Base Transceiver Site zvichiongororwa kwava Comprehensive hurongwa tichibatanidza pamwe Data (kufanana musuo magineti Switch mamiriro (suo zvakanaka) tembiricha, mwando, simba, mhepo conditioner, mufananidzo, etc.), vakawana kubva Switch uye chinopfuudzwa inotumirwa kukurukurirana inouraya kuti pakati, kuti akuteerere ambient kwezvakatipoteredza, simba chinzvimbo uye akangwarira munguva chaiyo.
Site kure ezvinhu zvichiongororwa
Site simba rakawanda zvichiongororwa |
Site simba Kuparadzirwa zvichiongororwa
Site vashandi utariri
Site nechimbichimbi norudaviro uye vachizvitumira utariri
Nzvimbo mashandiro & utariri mutengo
Rongai zvokushandisa Nokuraramisa purogiramu
Supply yacho huni nguva
Kuderedza mafuta nezvimwewo simba rakawanda
Dzivirirai zvinokosha zvavo panzvimbo